Tsy Ankasitrahan’ny Fiarahamonina Irakiana Ny Lehilahy Mandihy An-dalambe, Saingy Nanohy Nandihy Izy Na Izany Aza… · Global Voices teny Malagasy
Tsy Ankasitrahan'ny Fiarahamonina Irakiana Ny Lehilahy Mandihy An-dalambe, Saingy Nanohy Nandihy Izy Na Izany Aza…
Voadika ny 10 Jolay 2016 8:49 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Nederlands, Español, Aymara, English
Adel Al-Jaf, fantatra amin'ny anarana an-tsehatra hoe “Adel Euro.” Sary: Jonathan Hollander/Facebook
Ity lahatsoratra nosoratan'i Lucy Martirosyan ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 6 Jolay 2016, ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mora aminy ny “moonwalk” (dihy miverina). Afaka maka tahaka saika ny fihetsika rehetra an'i Michael Jackson izy. Saingy te handihy ao anatin'ny toerana mitokana i Adel Al-Jaf, fantatra amin'ny anarana an-tsehatra “Adel Euro” raha nonina tao Iraka.
Raiki-pitia tamin'ny dihy izy rehefa avy nijery an'i Michael Jackson sy Britney Spears niara-nanao fampisehoana. Izany no fotoana nanapahany hevitra ho lasa mpandihy. Nanomboka teo, nanangona ny kapila mangilatr'i Michael Jackson izy ary naka tahaka ny dihin'ilay mpanakanto.
Saingy hafa tanteraka ny fandraisana ny lehilahy mihira sady mandihy ao Iraka, hoy i Al-Jaf tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny BBC tamin'ny 2015. Voaeso toy ny vehivavy, motraka na pelaka izy ireo.
Nampitandrina azy ny ray aman-dreniny fa mety hitondra olana ho azy ny dihy an-dalambe sy ny fanaovana rap.
Iray amin'ireo olona 250 matin'ny baomba tao Bagdad tamin'ny fanafihana nolazain'ny vondrona milisy ISIS fa nataony tamin'ny 3 Jolay tao amin'ny distrika i Al-JAf.
“Nilaza tamiko izy ireo fa mety hampidi-doza ao Iraka ny zavatra ataoko – satria tsy kolontsainay izany,” hoy i Al-Jaf tamin'izany antsafa 2015 izany. “Tsy afaka mandihy eny an-dalana aho na manao ireo fihetsika ireo eny ivelany. Nilaza izy ireo fa hitondra olana bebe kokoa eo amin'ny fiainako izany. Tsy misy ny hoavy antenaina amin'ity kanto ity, ity zavatra ity na ity fialam-boly ity raha mbola ao Iràka.”
Nanohy nandihy, nihira sy nanao rap foana i Al-Jaf na izany aza. Nifidy toerana mitokana ao anatin'ny zaridaina izy mba hanaovana ny seho. Rehefa hanakana azy ny polisy, dia milaza izy fa tsy nandihy fa nanao haiady – fihetsika lehilahy kokoa ka noho izany fihetsika ara-batana azo ekena kokoa amin'ny zavatra ataon'i Al-Jaf.
Tamin'ny alalan'ny YouTube sy Skype, nahazo tamberina tamin'i Jonathan Hollander, mpanorina ny vondrona mpandihy, Batter Dance ao New York mikasika ny dihiny izy.
Niara nanao fampisehoana tamin'i Battery Dance tao amin'ny renivohitra Jordaniana, ao Amman i Al-Jaf taty aoriana.
Fampisehoana voalohany nataon'i Al-Jaf teo anoloan'ny mpijery ity. Ity ny lahatsary fampisehoana nataony voalohany.
Raha niverina avy tany Jordania hamonjy an'i Iraka izy, nilaza i Al-Jaf fa tafalatsaka tanaty hakiviana.
“Amin'ny kolontsainay, hiady amin'ireo karazana fialam-boly ireo izy ireo. Tsy tena lehilahy ny lehilahy mandihy,” hoy izy.
Saingy nanery ny tenany hanohy handihy izy na izany aza, na dia eo aza ireo fanehoana ratsy ataon'ny fiarahamoniny amin'ny lehilahy sy ny dihy.
“Handao an'i Iraka aho indray andro ary handeha any amin'ny toerana misy ny olona mankafy dihy fa tsy miady amin'izany.”